Ukuhlaselwa okuphezulu okungu-5 okwenziwe kwiiSayithi ze-Ecommerce Martech Zone
Olunye lweenkcukacha-manani ezothusayo ngokubhekisele kwi-COVID-19 kunye nokutshixwa kukonyuka okumangalisayo kwimisebenzi ye-e-commerce:
I-COVID-19 ikhawulezise ngokukhawuleza ukukhula kwe-e-commerce, ngokwengxelo yeAdobe ekhutshwe namhlanje. Inkcitho iyonke kwi-Intanethi ngoMeyi ibethe i-82.5 yezigidigidi zeedola, inyuka nge-77% ngonyaka-nangaphezulu konyaka.
UJohn Koetsier, COVID-19 Ukukhula okukhawulezayo kwe-E-Commerce '4 ukuya kwi-6 iminyaka'
Akukho shishini lingakhange lichukunyiswe… iinkomfa zihambile, izikolo zafudukela kulawulo lokufunda nakwi-intanethi, iivenkile zafuduswa zaya ephepheni nasekunikezelweni kweenkonzo, iivenkile zokutyela zongeza ukukhutshwa, nkqu neenkampani zeB2B zaguqula amava abo okuthenga ukubonelela ngethemba ngezixhobo ukuzenzela izinto zabo kwi-intanethi.
Ukukhula kwe-E-commerce kunye neengozi zoKhuseleko
Njengalo naluphi na ukwamkelwa kwabantu abaninzi, izaphuli-mthetho ziyayilandela imali… kwaye kukho imali eninzi ngobuqhetseba kwi-e-commerce. Ngoku ka IiSayensi zoMqondiso, ulwaphulo-mthetho lwe-cyber luya kukhokelela ngaphezulu kwelahleko engaphezulu kwe-12 yezigidigidi zeedola Njengoko iinkampani ezintsha zisiya kurhwebo lwe-elektroniki, kubalulekile ukuba zibandakanye ukhuseleko kutshintsho lwazo… phambi kokuba zibabekele ishishini.
Ukuhlaselwa okuphezulu kwe-E-commerce
Ukuthatha iAkhawunti (ATO) - kwaziwa njenge ubuqhetseba bokuthatha iakhawunti, I-ATO inoxanduva malunga ne-29.8% yazo zonke iilahleko zobuqhetseba. I-ATO ifumana iziqinisekiso zokungena kumsebenzisi ukuze zithathe iiakhawunti ezikwi-Intanethi. Oku kubenza ukuba bafumane idatha yekhadi letyala okanye benze izinto ezingagunyaziswanga besebenzisa iakhawunti yomsebenzisi. Ubuqhetseba be-ATO bunokusebenzisa izikripthi ezizenzekelayo ezifaka iziqinisekiso ngobuninzi okanye zibachwetheze umntu kwaye zingene kwiakhawunti. Ii-odolo zinokusiwa kwiidilesi zonikezelo ezibekwe esweni apho iimveliso zithathwa zaze zasetyenziswa okanye zathengiswa ngemali. Igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo zihlala zithengiswa ngobuninzi okanye zithengiswa kwiindawo zentengiso zeWebhu emnyama. Ngenxa yokuba abantu abaninzi basebenzisa igama elifanayo kunye negama lokugqitha, izikripthi zisetyenziselwa ukuvavanya igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwezinye iisayithi.
Umxhasi weChatbot - i-bots ziba yinto ebaluleke kakhulu kwiindawo ze-e-yorhwebo kubasebenzisi ukuba bahlanganyele neenkampani, bahambe ngeempendulo ezinengqiqo, kwaye bathethe ngqo kubameli. Ngenxa yokuthandwa kwabo, bajolise kubo kwaye banoxanduva lwe-24.1% yayo yonke imisebenzi yobuqhetseba. Abasebenzisi abakwazi ukubona umahluko phakathi kwengxoxo esisemthethweni okanye engathandekiyo enokuvulwa kwiphepha. Usebenzisa i-adware okanye i-web script inaliti zobuqhophololo zingabonisa incoko yokuxoxa pop kunye nokukhupha ulwazi olunobuthathaka kumsebenzisi kangangoko banako.
Iifayile zangasemva -Izigebenga ze-cyber zifaka i-malware kwindawo yakho ye-e-commerce ngamanqaku okungena angakhuselekanga, njengeeplagi eziphelelwe lixesha okanye iindawo zokufaka. Nje ukuba bangene, banokufikelela kuyo yonke idatha yenkampani yakho, kubandakanya ulwazi lwabathengi oluchongiweyo (PII). Ezo datha zinokuthengiswa okanye zisetyenziselwe ukufikelela kwiakhawunti yomsebenzisi. I-6.4% yalo lonke uhlaselo kukuhlaselwa kwefayile engaphandle.
SQL Injection Iifom ezikwi-Intanethi, imibuzo ye-URL, okanye nokuba ziincoko zokubonisana zibonelela ngeendawo zokungena zedatha ezinokuthi zingabinzima kwaye zinokubonelela ngesango labagculeli ukuba babuze ulwazi olusemva kolwazi. Loo mibuzo ingasetyenziselwa ukukhupha ulwazi lomntu kwiziko ledatha apho kugcinwa khona ulwazi lwesiza. I-8.2% yalo lonke uhlaselo lwenziwa ngenaliti ye-SQL.
Isikripthi esinqamlezayo (XSS) -Uhlaselo lweXSS lwenza ukuba abahlaseli bafake iskripthi ngokusebenzisa isikhangeli somsebenzisi kumaphepha ewebhu ajongwa ngabanye abasebenzisi. Oku kunceda abahlaseli ukuba badlule kulawulo lokufikelela kunye nokufikelela kulwazi oluchongiweyo lomntu (PII).
Nantsi i-infographic enkulu evela kwiiNzululwazi zeSayina Ukunyuka kwamaza oRhwebo ngobuqhetseba -Kubandakanya iindlela, iipateni, kunye namanyathelo okuzikhusela inkampani yakho kufuneka iyazi kwaye ibandakanye nasiphi na isicwangciso se-e-commerce.
tags: ongenisa kwiakhawuntiukuthatha iakhawuntiUhlaselo lokuthatha iakhawuntiubuqhetseba bokuthatha iakhawuntiuphendulanekuyiIsikripthi esinqamlezayoubugebenga be-cybere-commerceamanani ohlaselo lwe-e-commercee-commerce ukuziphendulelaiindlela zorhwebo ngobuqhetsebaI-e-yorhwebo iipateni zobuqhetsebaubuqhetseba becommerceukhuseleko lwe-ecommerceubuqhetseba kwi-intanethiUkhuseleko kumthengisi we-cyberukhuselekoinzululwazi enyesql inalitiUhlaselo oluphezulu lilizweukuhlaselwa kwewebhu
Ukuqonda ukuHanjiswa kweDilesi, ukuHanjiswa koMgangatho, kunye nokuQinisekiswa kwee-API
Inguqulelo kunye nokuKhuphela ukuKhulisa ukuSebenza kweVidiyo